Otu esi eme ka biohumus n 'ulo - Mkpụrụ ubi - 2020
Na-eme onwe gị n'onwe gị: emepụta n'ụlọ
Biohumus bụ ezigbo mmanụ fatịlaịza nke na-enye nri ma na-edozi nri na ala, nke na-enye gị ohere ịba ụba buru ibu na ihe ọkụkụ gburugburu ebe obibi. A na-etinye ya na okwu a, otú o si dị iche na fatịlaịza ndị ọzọ na otu esi eji aka gị mee biohumus, anyị ga-agwa ya n'isiokwu a.
Ịhọrọ ma zụrụ ikpuru compost
Compost nkwadebe (edozi mkpụrụ)
Bookmark (ntọhapụ) ikpuru na compost
Nlekọta na ọnọdụ maka idebe ikpuru compost
Nlele (ngalaba) nke ikpuru na biohumus
Kedu vermicompost na otu esi eji ya
Biohumus ma ọ bụ vermicompost bụ ngwaahịa nke nhazi nke ihe ọkụkụ dị iche iche na-emepụta ihe ubi. Nke a bụ ihe dị iche na ya site n'otu humus ma ọ bụ compost, bụ nke a kpatara n'ihi ihe dị iche iche nke nje bacteria na microorganisms.
Biohumus nwere àgwà ndị dị otú ahụ dị ka ịrụzi ọdịdị nke ala na ihe ndị nwere mmiri. Na mgbakwunye, ntinye nke nitrogen, phosphorus na potassium dị na ya dị elu karịa karịa akụkụ ndị ọzọ. Uru nke vermicompost bụkwa:
humus ọdịnaya site na 10 ruo 15%;
enweghị nje bacteria, mkpụrụ osisi kụrụ, akwa salts;
enwere ọgwụ nje na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke microorganisms ndị na-emetụta nhazi ala;
mmepe ngwa ngwa na mmegide na-adịgide adịgide na osisi na-eri nri a;
dị irè maka atọ ruo afọ asaa.
Vermicompost bụ fatịlaịza na-adịghị emerụ ahụ, ha apụghị ịkwata ala ma ọ bụ osisi ahụ, na-emerụ ndị mmadụ, anụmanụ ma ọ bụ aṅụ, n'ọnọdụ ọ bụla na n'ala ọbụla ọ na-eweta.
E gosipụtara mkpụrụ ndụ nke ọma mgbe eji:
maka igbochi ọrịa ndị na-ekesa ihe ọkụkụ na mfe ịgbanye ọnọdụ okpomọkụ;
na-agba ọsọ germination nke osisi na-amụba ọnụ ọgụgụ nke seedlings;
iji mee ka olu di elu ma mee ka ihe ubi kpoo;
maka mgbake ngwa ngwa, mweghachi na mmezi nke ọmụmụ ala;
iji merie ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ (mmetụta ruo ọnwa isii);
iji mee ka okooko osisi dị mma.
Tụkwasị na nke ahụ, iji ngwaahịa a na-enyere aka belata ahịhịa na mpaghara ugbo.
Ị ma? Mkpụrụ nke osisi a na-akụ na vermicompost bụ pasent 35-75% karịa nri a na-eri.
Okwu ole na ole banyere otu esi eji biohumus n'ime ubi. A na-eji ya dị ka isi nri maka:
ịgha mkpụrụ na ịgha mkpụrụ na-emeghe n'ala nakwa na griin ha;
nhazi elu nke ụdị osisi ugbo nile;
nlekota ndi mmadu na ala;
arụ ọrụ oke ohia;
na-eme ka osisi fatịlaịza na-akụ akwụkwọ na-eto eto.
A na-eji fatịlaịza organic a n'oge nile: site na mmalite oge opupu ihe ubi ruo na ngwụsị mgbụsị akwụkwọ.
A pụrụ iji mmiri mee ihe na ala ọ bụla na nha ọ bụla, ọnụ ọgụgụ ngwa ngwa a tụrụ aro - 3-6 tọn fatịlaịza fatịlaịza kwa 1 ha maka nnukwu ebe, maka obere - 500 g kwa 1 m².
Liquid ngwọta maka nri na atọ osisi a kwadebere site na 1 liter nke vermicompost, nke diluted na 10 lita nke mmiri ọkụ.
A na-eresị mkpụrụ ndụ n'ime mkpụrụ osisi na mkpụrụ mmiri (nkwupụta ụlọnga).
Ị ma? Na nke mbụ, ndị America malitere ịzụ ikpuru na ugbo pụrụ iche (vermiculture) n'ime afọ 40 nke narị afọ gara aga. Mgbe ahụ, vermiculture gbasaa na mba Europe. Taa ọ kacha mara amara na Germany, UK, Netherlands na mba ndị ọzọ.
Enwere ike ịkwadebe ya ngwa ngwa n'ụlọ. E nwere ụzọ abụọ iji mee nke a:
na oghere oghe;
n'ime ụlọ ahụ.
Usoro mbu bu ihe siri ike, ebe o choro ka ndi mmadu tinye aka na ikpuru anuzu. A na-eji nke abụọ eme ihe mgbe mgbe, ebe ọ bụ na ọ bụ na njedebe ọ dị mfe ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ dị mkpa nke na-akpụ akpụ.
Ma na nke mbụ na nke abụọ ọ ga-adị mkpa iji kwadebe composter pụrụ iche maka ịzụlite. Azụmahịa eji maka vermifabriki a.
Gụkwuo banyere esi esi nri anụ, gụọ ihe ndị na-esonụ. N'ozuzu, usoro a nwere mpaghara ise:
nhọrọ nke ụdị na ịzụta nke ikpuru;
ịtọ ụmụ anụmanụ na compost;
elekọta na inye nri;
nhichapu ikpuru na biohumus.
A na-achọta Earthworms ma nakọtara n'onwe ha ma ọ bụ zụrụ n'ụlọ ahịa ahụ. Ọtụtụ mgbe, ikpuru na-acha uhie uhie Californian na-eji vermicultivation (bred na-adabere na nri na 50s - 60s nke narị afọ nke 20), ma ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyekwa ndị ọzọ ụdị: onye na-atụ anya, nri, earthy, Dendroben Veneta (ikpuru Europe maka ịkụ azụ).
Ndị na-emepụta ọgwụ nke vermicompost na-ekwu na ụdị kachasị nke ụdị ndị a maka vermicultivation bụ red na-acha uhie uhie na onye na-atụ anya. Ndị mbụ na-amụba nke ọma, na-ebi ndụ ruo ogologo oge (afọ 10-16), na-arụ ọrụ ngwa ngwa, ma ọdịiche ha kachasị bụ obere nkwenye.
Ị ma? N'ụbọchị ahụ, otu ikpuru nwere ike ịgafe n'usoro ihe nchịkọta nri ya bụ ala dị nha nke ahụ ya. Ya mere, ọ bụrụ na anyị atụlee nke ahụ na anụ ọhịa a na-awagharị ihe ruru 0,5 g, mgbe ahụ, mmadụ 50 n'otu awa 24 na hectare ala nwere ike ịhazi 250 kg ala.
A na-ewepụkwa onye na-egwuputa ihe site na ikpuru nsị. Ọ dị ngwa na mmepụta nke fatịlaịza (ọ na-emepụta ruo 100 kilogram nke biohumus), adịghị arịa ọrịa na ọrịa ntiwapụ, na-emepụta nke ọma (mepụta ruo mmadụ 1500) ma nwee ike iguzogide okpomọkụ - ọ na-abanye n'ime ala iji ghara ifriizi. Ị nwere ike ịzụta ikpuru na ụlọ ahịa pụrụ iche, gụnyere na Ịntanetị, ma ọ bụ vermuschestvah. Ha na-erekarị ezinụlọ, ọ dịkarịa ala 1500 iberibe ọ bụla, nke gụnyere 10% nke ndị okenye, 80% ụmụaka na pasent 10 nke cocoons. Mgbe ịzụrụ anụmanụ, ịkwesịrị ịṅa ntị na njem ha na agba ha.
Dịka anyị kwurula, vermicompost nwere ike ịkwadebe ma ọnọdụ nke okpukpu okpomọkụ, nakwa n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ. Ebe obibi ọ bụla ga-eme: ụlọ ịgbaba ụgbọala, ịwụfu, okpuru ulo. Ụfọdụ na-akwadebe ndị chervyatniki n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ. Isi ihe - iji wuo composter ma ọ bụ compost olulu ma ọ bụ ikpo.
Na n'okporo ámá, a na-eme ụlọ maka ikpuru n'ụdị igbe nke osisi na-enweghị ike na mkpuchi. Edebe igbe ahụ na ebe echekwara site na anyanwụ n'elu ala, n'ọnọdụ ọbụla ọ bụghị na ihe ahụ, n'ihi na mmiri gafere ga-achọ ụzọ.
Akụkụ nwere ike dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, 60-100 cm elu, 1-1.3 mita n'ogologo na n'obosara. N'ụlọ, ụlọ nke ikpuru pụkwara ịkwalite site igbe (plastik) (akpa), ma ọ bụ site na igbe ndị e debere n'ime ya. -N'elu ngwa ngwa ulo. Maka ikpuru ozuzu na-adabara nnukwu aquariums. Ị nwere ike iji sieve plastic, nke a na-etinye n'ime ite ma ọ bụ akpa.
Ọ dị mkpa! A ghaghị iji tankị kwadebe tank ahụ: tinye ájá dị na ala ma ọ bụ mee oghere na ya. Ọ bụrụ na ewepụghị mmiri, ụmụ anụmanụ ga-anwụ n'oge na-adịghị anya.
Iji mee ka ọtụtụ ikpuru dị ka o kwere mee na obere ụlọ, igbe ma ọ bụ ihe ntanetị nwere ike ịnye otu na otu na ọtụtụ ọkwa ma ọ bụ shelves. N'ihi ya, ọ ga-ekwe omume itinye ihe dịka otu nde mmadụ na-efegharị anụ na mpaghara 15-20 m².
Maka ụdị oke ikpuru, ọ ga-adị mkpa iji dozie mkpụrụ edozi, nke kwesịrị ịgụnye:
nri ma ọ bụ idozi nri, mkpofu ahihia nke osisi, akwụkwọ, n'elu - otu akụkụ;
ájá - 5%;
hay (ahịhịa) ma ọ bụ sawdust - otu akụkụ.
Maka compost, ụdị nri ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ dị ọhụrụ, yana nnụnụ, ụkọ oke bekee, nke dị ọnwa isii na-adaba. Ọ dịghị mkpa ịme nri na-emepụta ihe karịrị afọ abụọ gara aga.
Tupu e tinye ya n'ime composter nke ikpuru, mkpụrụ ahụ aghaghị ịmalite ọgwụgwọ pụrụ iche - composting. Ọ ghaghị iwe ọkụ na ọnọdụ dị ọkụ maka ọtụtụ ụbọchị. Iji mee nke a, a na-ewe ya ọkụ naanị na anyanwụ (okpomọkụ a chọrọ ka ọ dị mfe inweta site n'April ruo Septemba), ma ọ bụ wayo ma ọ bụ peat (20 n'arọ kwa 1 ton nke akụrụngwa) abanye n'ime ya. Ngwurugwu kwesịrị ịdịgide ruo ụbọchị 10. Site na nke mbụ ruo n'ụbọchị nke atọ, okpomọkụ kwesịrị ịdị na +40 Celsius, ụbọchị abụọ na-esote - na + 60 ... +70 ° C, site na nke asaa rue ụbọchị iri - + 20 ... +30 ° C.
Mgbe nkwadebe compost, a ghaghị ịnwale ya site n'ịgba ọtụtụ ikpuru n'elu. Ọ bụrụ na ụmụ anụmanụ ahụ abanyela n'ime minit ole na ole, mgbe ahụ, compost dị njikere, ma ọ bụrụ na ha nọ n'elu, mkpụrụ ahụ ka ga-eguzo.
Ihe kacha acidity nke compost bụ 6.5-7.5 pH. Site na mmụba na acidity n'elu 9 pH, anụmanụ ga-anwụ n'ime ụbọchị asaa.
Mụtakwuo maka nri ndị ọzọ, dịka Kemira, mkpịsị mmiri, mmiri, Kristalon, Ammophos, potassium sulfate, Zircon.
Ihe nyocha nke acidity nwekwara ike ịbụ usoro ule. Gbaa mmadụ 50-100 kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na oge a gasịrị, mmadụ nile dị ndụ, mgbe ahụ compost dị mma. N'ihe banyere ọnwu nke mmadụ 5-10, ọ dị mkpa ịkụda acidity site na ịgbakwunye nzu ma ọ bụ wayo, ma ọ bụ iji belata alkalinity site na ịgbakwunye ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa.
Ihe kachasị mma mmiri compost bụ 75-90% (ga-adabere n'ụdị ikpuru). Mgbe iru mmiri dị n'okpuru 35% n'ụbọchị izu, ụmụ anụmanụ nwere ike ịnwụ.
Ulo kachasị mma maka ọrụ dị mkpa nke ikpuru bụ + 20 ... +24 ° C, nakwa na okpomọkụ dị n'okpuru -5 Celsius C na karịa +36 ° C ihe gbasara nke puru omume nke ọnwụ ha bụ nnukwu.
A na-eji nwayọọ dochie eriri mmiri na mkpụrụ nke composter. Mmadụ 750-1500 ga-ada na mita nke ọ bụla.
Ọ dị mkpa! Ebe ọ bụ na ikpuru adịghị anabata ìhè na-enwu gbaa, elu nke composter ga-ekpuchi ya na ihe gbara ọchịchịrị nke na-enye ohere ikuku gafere.
A ga-eme mgbanwe maka ụmụ anụmanụ maka izu abụọ ma ọ bụ izu atọ.
Ngwurugwu na composter na-edo onwe ya n'okpuru mgbe niile na ịgbara mmiri. A ga-enyekwa ikpuru nri.
Ekwesịrị ịme mkpuchi ugboro abụọ n'izu n'iji osisi ma ọ bụ nke pụrụ iche maka vermicompost. Emere ya na omimi nke mkpụrụ ahụ, mana na-enweghị agwakọta.
Naanị mmiri na-ekpo ọkụ (+ 20 ... +24 ° C) ma kewaa mmiri (ọbụlagodi ụbọchị atọ). Mmiri mmiri nwere ike igbu anụmanụ. Mmiri mmiri ma ọ bụ gbazee mmiri dị mma maka ịgbara mmiri. Ọ na-adaba na mmiri site na mmiri nwere ike na obere oghere.
Lelee ihu mmiri nke mkpụrụ ahụ, na-ejide ya obere aka. Ngwurugwu nhicha zuru ezu bụ otu nke, mgbe a na-emetọ ya, na-eme mmiri, ma ọ bụghị mmiri mmiri. A na-eme nri nke mbụ maka ụmụ anụmanụ na ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ mgbe emechara. N'ọdịnihu, ọ dị ha mkpa inye ha nri abụọ ọ bụla ruo izu atọ. Ejiri akwukwo nri nke akwukwo nri na akwa nke 10-20 cm n'elu ala. A na-eji nsị anụ, nnu nke nduku, na peel, melons, banana peel, bee bee, wdg.
Lelee ndepụta ọgwụ ndị ga-abara gị uru maka nlekọta ubi ahụ: "PhytoDoctor", "Nemabakt", "Thanos", "Strobe", "Bud", "Quadris", "Corado", "Hom", "Confidor" .
Ka oge na-aga, a ga-ekesa mkpụrụ nke dị n'ime igbe atọ. Azụ ga-eri nri na akwa elu nke mkpụrụ dị omimi nke 5-7 cm Na akwa nke abụọ - na omimi 10-30 cm, ihe ka ọtụtụ n'ụmụ anụmanụ ga-adị ndụ. Ihe nile dị n'okpuru, na nke atọ, na bụ biohumus.
Na mmiri ga-adị njikere ọnwa anọ ma ọ bụ ọnwa mgbe mgbochi ikpuru. Mgbe igbe na ikpuru na biohumus zuru ezu, a ga-ewepụ anụmanụ na fatịlaịza. Iji kewapụ ikpuru, ha na-agwụ n'ihi ụbọchị atọ ruo ụbọchị anọ. Ekem, ke kiet ke otu kiet ke otu ikpehe ikpehe udia, esisịn udia udia udia 5-7 ke ndutịm. Ụmụ anụmanụ ga-ezukọ na saịtị a ruo oge ụfọdụ. Mgbe ụbọchị ole na ole gachara, a ga-ewepu oyi akwa ikpuru. Ruo izu atọ, a na-emeghachi usoro a ugboro atọ.
Biohumus bụ otu ọchịchịrị gbara ọchịchịrị nke a na-achịkọta na nke a mịrị amị. Wee kpochapu ya ma sie ya maka nchekwa. Ndụ ndụ ya bụ ọnwa 24 mgbe echekwara na okpomọkụ nke -20 ruo + 30 Celsius.
Ị ma? Na mba European Union, na America na Japan, ngwaahịa ndị toro na ubi ndị a na-azụ na biohumus nwere mkpa ka ukwuu ma dị oke ọnụ karịa ndị toro na ala ndị a na-enye nri ma ọ bụ ihe oriri na ịnweta. O nweghị ihe na-emerụ ụmụ mmadụ, nke pụtara na ọ nwere uru dị oke mkpa.
Ngwurugwu nke ndi na-aru ugbo na-emewanyewanye ihe n'etiti ndi oru ugbo na ndi ozo. Mmepụta ya bụkwa azụmahịa na-ekwe nkwa. Na ọ bụ ezie na ọ dịghị mfe ma dị ọnụ ala iji mepụta ihe a na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma, nke dị na gburugburu ebe obibi dị ọcha, buru ibu, nri dị mma na nke dị ụtọ ga-aba uru. Akpuru na 1500-3000 ga-ezuru iji nweta organic fatịlaịza, nke zuru oke iji zụọ ubi ubi nke atọ ruo narị anọ.